होटल म्यानेजमेन्ट किन पढ्ने ? – Rara Khabar
होटल म्यानेजमेन्ट किन पढ्ने ?
नेपालको प्राकृतिक र साँस्कृतिक सुन्दरताको समुचित सदुपयोग गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनका माध्यमबाट देशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने अनि रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो । जसका लागि होटेल व्यवस्थापन तथा Hospitality सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ ।
यसका लागि सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यवहारिक ज्ञान हुनु पर्दछ । जुन ज्ञान र सीप Culinary The Hospitality Center ले दिन्छ । कर्णाली प्रदेशका युवालाई लक्षित गरी बीरेन्द्रनगमा CTH Center स्थापना भएको छ । यसको मुख्य धेय भनेकै योग्य र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गरी उनीहरुलाई आम्दानीको बाटो देखाउने र रोजगारीको सम्भावनाको ढोका खोल्ने हो । जसले राष्ट्रको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रुपान्तरणमा सघाउ पु¥याउँछ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।
युवा पुस्तालाई प्रोत्साहन गरेर व्यावसायिक हिसाबले देश तथा विदेशमा रोजगारीका लागि सक्षम बनाउन पुलको काम CTH ले गर्छ । यसले श्रम बजारको माग अनुसारको गुणस्तरीय व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम मार्फत् क्षमता भएर पनि बेरोजगार जीवन बिताइरहेका युवाहरुका लागि आत्मज्ञानको बाटो देखाउने काम पनि गर्छ ।
कसरी सहयोग गर्छ ?
होटेल ट्रेनिङहरु जस्तै – Commercial Cookery Culinary Art ,बेकरी, वेटर वेर्टेस, बारटेन्डर होटल, व्यवस्थापन तथा अतिथि सत्कार लगायतका तालिम दिन्छ ।
प्रशिक्षार्थीहरुलाई होटेल व्यवस्थापन सम्बन्धी सैद्धान्तिकका साथै व्यवहारिक कक्षा सञ्चालन गरी दक्षता अभिवृद्धि गर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुका लागि छोटो तथा लामो अवधिका विभिन्न किसिमका प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमका दिन्छ ।
होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेण्ट बार जस्ता कुराहमा उच्चस्तरिय सेवा सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्दै आधुनिक सुविधा सम्पन्न होटेल व्यवसाय सम्वन्धी ज्ञान, सीप र क्षमता प्रदानमा सहयोग गर्छ ।
पैसा भएर पनि व्यवसाय गर्ने र पैसा लगानी कता गर्नुृपर्छ भन्ने थाहा नभएका युवाहरुलाई यसले नेपालमा पनि धेरै सम्भावनाहरु छन् भन्ने ज्ञान दिन्छ ।
Four Fundamentals of coffee
The Barista Roles & Responsibility
The Coffee Growing Process & Processing Method
The Basic Coffee Drinks
Culinary Course: (cooking class)
Success in hospitality Study
In simple terms, housekeeping is responsible for cleaning and maintaining hotel rooms. Some of the main tasks performed by housekeepers are:
Dealing with laundry
Students should have completed the School leaving Certificate ( SLC ) or equivalent
Students should have basic knowledge of English Language , both oral and written
Students Should have good health and mentally motivated to the industry
Applicants who possess other qualifications will be considered on case-by-case basis.
+977 – 083523031, 9849108335
Birendra nagar -04, Bhairabsthan, Surkhet
culinarythehospitality@gmail.com (कठायत CTH Center संचालक हुन् )
प्रकाशित मितिः २६ माघ २०७६, आईतवार १९:५८